Ciidamada Itoobiya oo isu diyaarinaya ka bixitaanka degmada Tiyeeglow – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Itoobiya oo isu diyaarinaya ka bixitaanka degmada Tiyeeglow
Xaalad jahwareer ah ayaa ka taagan degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool, kaddib markii Saraakiisha Ciidamada Itoobiya ay u sheegeen maamulka degmada inay isaga baxayaan
Mas’uuliyiinta maamulka degmada Tiyeeglow ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiya ay ku wargeliyeen inay isaga baxayaan Tiyeeglow.
Taliyaha Booliska degmada Tiyeeglow Cabdi Ibraahim Taakow ayaa sheegay in saraakiisha Itoobiya ay la kulmeen, ayna u sheegeen in aanay ku qancsaneyn ka bixitaankooda Tiyeeglow.
Hase ahaatee waxaa uu tilmaamay in hadii ay ka baxaan Ciidamada Itoobiya ay difaac ka geli doonaan qeybaha magaalada, si ay uga hor-tagaan weeraro Al-Shabaab ku soo qaadaan.
Ciidamada Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay ka isaga baxayay deegaano ka tirsan Gobolada Hiiraan, Bakool iyo galgaduud, waxaana maalin ka hor ay isaga baxeen deegaanka Halgan oo u dhaxeeya degmooyinka Buulo Burde iyo Beledweyn.
Al-Shabaab ayaa durbaba dib ula wareegay deegaanadii u dambeeyay ee ay isaga baxeen Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
Ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ee deegaanada gobolada dalka ayaa lagu tilmaamay inay la xiriirto kacdoon ka socda gudaha Itoobiya, kaddib markii banaan baxyo rabshado wata ay ka bilowdeen Gobolada ay degaan Qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada.
Xaalada magaalada Gaalkacyo oo saaka degen iyo dad badan oo barakacaya
Sarkaal ka tirsanaa Hey’adda Nabadsugida oo xalay lagu dilay Muqdisho